Col. Tuuryare: Qofkii Al-shabaab ah ee la qabto, Waalidkiisna ha lala soo wado |
Col. Tuuryare: Qofkii Al-shabaab ah ee la qabto, Waalidkiisna ha lala soo wado
Guddoomiyaha maxkamadda ciidamada qalabka sida ee dowladda Soomaaliya, G/sare C/raxmaan Maxamuud Tuuryare oo warbaahinta la hadlay ayaa ka dalbaday hay’adaha ammaanka in qofkii Al-shabaab ah ee lasoo qabto lala soo xiro waalidkiis, si sharciga loo wada-horgeeyo.
Col. Tuur-yare ayaa sheegay in tallaabadan ay tahay mid looga gol-leeyaha in lagu ogaado in waalidku uu raalli uga yahay wiilkiisa ama gabadhiisa inay Al-shabaab ka tirsanaato iyo in kale.
“Waaliddiinta waxaa looga baahan yahay in haddii cunuggooda uu ka mid noqodo Al-shabaab inay kusoo wargeliyaan hay’adaha ammaanka si wax looga qabto, taas oo keenaysa in waalidka uu bari ka ahaado dhibaatada uu geysanayo cunuggiisa,” ayuu yiri guddoomiyaha.
Sidoo kale, guddoomiyaha ayaa sheegay in waalidka aan soo sheegin ilmahooda in ay ka mid noqdeen Al-shabaab ay u arkayaan inay raalli ka yihiin, ayna tahay inay soo qabtaan hay’adaha ammaanka si sharciga loola tiigsado.
“Haddii cunuggaagu noqodo Showkatul Cayn (Qodax ileed) halkii uu ka ahaan lahaa Qurratul Acyun (Indha-qabowsi) waa inaad kusoo wargelisaa hay’adaha amniga si aad u muujiso inaadan ku raacsanayn howsha uu ku jiro oo ay keligiis ay gaar u tahay,” ayuu yiri guddoomiyaha maxkamadda ciidamada qalabka sida ee dowladda Soomaaliya.
Waa markii ugu horreysay oo guddoomiyaha maxkamadda ciidamada uu hadalkan ku dhawaaqo, isagoo horay u sheegay in qofkii Al-shabaab ka tirsan ee la qabto aanu dib ugu laaban doono shacabka gudihiisa oo ay dili doonaan.
Si kastaba ha ahaatee hadalladan ayaa waxay kusoo beegmayaa xilli Al-shabaab ay sheegtay inay wado qorshayaal ay ku weerarayso xarumaha dowladda iyo AMISOM ay ku leeyihiin magaalada Muqdisho ee xarunta Soomaaliya.
Dhanka kale, madaxweynaha Somalia ayaa sheegay in dowladdu ay si aad ah ugu diyaar-garowday ka hortagga falalka ammaan-darro ee Al-shabaab ay doonayso inay ka geysato Muqdisho.